" Is Yeel-yeelku Ma Siyaasad Baa"
Sunday May, 27 2018 - 14:35:00
Aduunyadu Xulifaddu way ka dhacdaa , inaguna waxaynu xulifo ahayn ilaa 1954 yaa yidhi ?
Ereyga Jeegaan hadmuu baxay , ma doorashadan mise wuu ka horeeyay , miyaanu ahayn erey bixin ku xidhiidhsanayd Xulifadaa horre ee jirtay ilaa 1954 oo xiligii snm naanaystan cusub yeelaay .
Dhab-libaax ma xisbi baa yidhi , ma beel baa tidhi mise qof baa yidhi ?
Dhab libaax yaa ah ama se ahaa ?
Xisbigii Udub hadduu aasaasay M I Cigaal Markuu dhintayna ay ka dhaxleen Daahir Riyaale iyo Axmed Y Yaasiin, ma xulifo beeleed ay ku tiirsanaayeen baa jirtay, mise
xisbi xaakim xukuumadi samaysay buu ahaa oo isku filaa ?
Madaxwayne Xigeenkii Xisbiga Udub Axmed Yuusuf iyo taageerayaashisii sidda Xaaji Muuse Dalab ,Sul Indha-case iyo qaar kale oo badani miyaanay ahayn Kulmiyaha cusub , haddii xulifo horre jirtay hadmay ka baxeen ?
Jeegaanta haddii la inoo sheegay inay jirtay ilaa 1954 , Xulifida kale intee bay jirtay , yaase ku midoobay ?
Ugu dambayn giraanta la sheeg-sheego ma doorashadan halku dhig xisbi ku galay doorasho oo aan cid gaara tilmaamayn bay ahayd mise mid ka horaysay oo jirtay ?
Hadiise ay jirtay amaba doorkan la unkay , yaa ku heshiiyey goormaa laggu heshiiyey maxaase laggu heshiiyey ?
Ugu dambayn marka lagga shiidaal qaato siday doorashadii dhawayd u dhacday , Somaliland ama waxay yeelanaysaa labba xulifo siyaasadeed oo is celiya amaba waxay yeelanaysaa Xisbi keliya oo xoogle , aragtidayda gaar ahaaneedna is yeel-yeelku siyaasad maaha .
Borama "Cadowgayagii waxa noqday oo noo caddaaday dawladda somalia, annagoo dhibaataysan oo duufaano nagu dhufteen ayay nasoo weerareen,Jabuutina way noo gurmatay oo diyaarado no soo dirtay"Badhasabka Awdal
26/05/2018 - 13:53:15
Gudaha:-"Hargeysa Qolooyin Baarqab Ah Baa Jooga" Prof Abdi Samater Oo Ka Hadley Dagaalka Tuko-raq.
24/05/2018 - 19:17:52
Ethiopia:-Ma isbadal siyaasadeed baa ka soo fool leh deegaanka Soomaalida Itoobiya?.